မီးပြတိုက်: April 2011
Thoughts Rule The World (လောကကြီးအား အတွေးအခေါ်များက စိုးမိုးထားသည်)
Happy BD SV
မကြာခင်မှာ ကျရောက်တော့မယ့် ချစ်လှစွာသော sv ရဲ့ မွေးနေ့အတွက်....
၁ / ၂၀၁၁
Posted by SLIP in အမှတ်တရ
ဒီကနေ့မှာ ကျွန်နော်တို့ National Research University (MIET) တက္ကသိုလ်ရဲ့ ၁၈ ကြိမ်မြောက် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ Conference "Microelectronics and Informatics - 2011" ကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ကဏ္ဍအလိုက် Section (၁၁) ခုခွဲပြီး (၃) ရက် ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ MIET တက္ကသိုလ်ရှိ ရုရှား ကျောင်းသားနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ အပြင် အခြား အနယ်နယ်အရပ်ရပ် ကျောင်းပေါင်းစုံမှ Microelectronics and Informatics ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရှိသော စာတမ်းပိုင်ရှင်များစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေ လည်း အများကြီး တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Section №7 မှာပင် စုစုပေါင်း ကျောင်းသား (၄၂) ဦး ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာကျောင်းသား ၁၆ ဦး ထိ ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ Present လုပ်ရာတွင်လည်း ရုရှားကျောင်းသား (၆) ဦးသာ လုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာကျောင်းသား (၁၁) ဦး စင်ပေါ်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်တော့ (၆) ခုမြောက် Conference ဖြစ်ပြီး (၇) ခုမြောက် Publication ရတဲ့ နေ့ပါ။
Posted by SLIP in ဘာသာရေး
ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို ကျေနပ်ပါ။ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်နှင့် ကျေနပ်သူသည် စိတ်ချမ်းသာ၏။ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို မကျေနပ်သူများသည် သူများရထားသည်များကို လိုချင်ကြကုန်၏။
ကိုယ်ချမ်းသာ၊ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတတ်အောင် ကြိုးစားပါ။ မိမိရထားတဲ့ အခွင့်အရေးကို အထင်မသေးပါနှင့်။
ကိုယ် ရထားတာကို အထင်သေးသူသည် စိတ်မချမ်းသာနိုင်၊ စိတ်မချမ်းသာလျှင် သမာဓိမရနိုင်။
ကိုယ်ရထားသော လက်တလောတည်ရှိမှုကို မရောင့်ရဲခြင်းသည် စိတ်မချမ်းသာနိုင်။
ရထားတာနဲ့ ကျေနပ်ပါ.. ရှေးဘ၀က ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေါ်တွင် မူတည်၍ ဒီဘ၀၌ မတူညီသော ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိကြပေသည်။
တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရပိုင်ခွင့်ခြင်းမတူနိုင်။ သူများရပိုင်ခွင့်ကို လိုချင်ခြင်းသည်လည်း စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မည်မဟုတ်။
စိတ်ချမ်းသာလိုလျှင် မိမိရပိုင်ခွင့်နှင့် ကျေနပ်ပါ။ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို မကျေနပ်ပါက သူများရပိုင်ခွင့်ကို လိုချင်ကြ၏။
ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို အထင်မသေးပါနှင့်၊ သူများရပိုင်ခွင့်ကိုလည်း အားမကျပါနှင့်။
ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို မကျေနပ်ခြင်းသည် အကုသိုလ်များသာ ဖြစ်စေ၏။ အကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကုသိုလ်များ ပြောဆိုခြင်း၊ အကုသိုလ်များ ကြံစည်ခြင်းသည် ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို မကျေနပ်ခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို မကျေနပ်ခြင်းသည် အကုသိုလ်အားလုံး၏ အစ ပင် ဖြစ်သည်။
လူဖြစ်ခြင်းသည် ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ လူဖြစ်အောင် ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရသည်။
သာသနာနှင့် ဆုံခြင်းသည် ရပိုင်ခွင့်၊ သာသနာနှင့်ဆုံအောင် ကုသိုလ်တွေ လုပ်ခဲ့ရသည်။
ဆရာသမားကောင်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းသည် ရပါခွင့်၊ ဆရာသမားကောင်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံကောင် ကုသိုလ်များလုပ်ခဲ့ရသည်။
တရားဓမ္မနှင့် ကြုံဆုံခြင်းသည် ရပိုင်ခွင့်၊ တရားဓမ္မနှင့် ကြုံဆုံအောင် ကုသိုလ်တွေ ပြုခဲ့ရသည်။
အချိန်တိုင်း ရပိုင်ခွင့်ကို ကျေနပ်ပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါ။ သူများကို ဂရုမစိုက်ပါနဲ့၊ သူများရထားတာတွေကို မလိုချင်ပါနဲ့၊ မမက်မောပါနှင့်။ သူ့ကံနှင့်သူ ရသည်ကို သဘောပေါက်ပါ။
ရောင့်ရဲပါ။ အလုပ်ကိုရောင်ရဲသူသည် ပျင်းရိသူဖြစ်သည်။၊ ရပိုင်ခွင့်ကို ရောင့်ရဲသူသည် တရားရှိသူဖြစ်သည်။
ရပိုင်ခွင့် by အရှင်ဆေကိန္န
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
ZawGyi System Version 1.0.0.12
ZawGyi (Blogday Version w/clear type)
ZawGyi (For Windows 7, 64 bit)
My Research And Development
လူငယ်၊ ပညာရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ
John Goddard't "Life List"
MM Daily Mail Group
Myanmar Daily Mail Blog
For MIET post graduate students
EXPRESS TIME ဂျာနယ်
MIRROR - 3
မြန်မာ ငါတို့ပြည် ဘလော့
အတိုက်အခံတို့ရဲ့ အတိုက်အခံ ဘလော့
Open Resources88 ဘလော့
Voice Of Myanmar ဘလော့
Hero Of Myanmar ဘလော့
Freedom Nnews Group
၈၈ရဲ့ နော်မန် ဘလော့
Simple Views ဘလော့
NEW GENERATIONS ဘလော့
KING OF THE UNIVERSE ဘလော့
MM ONLINE WATCH
BEST 100 MYANMAR BLOGS
သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာ ရဟန်းတော်များ ဘလော့
မြန်မာ MP3 ALBUM.COM
ယခု တွေးခေါ်တတ်သူ()ဦး ဖတ်ရှုနေပါသည်။
Analysis of Pathloss Indoor Canal for D-MIMO System (pdf)
Antenna Concepts (ppt)
Antenna for low power applications (pdf)
Antenna Fundamentals (pdf)
Antenna Handbook (pdf)
Antenna Mounting Considerations (pdf)
Antenna Theory Microwave Antenna Theory and Design Silver (pdf)
Antennas for GSM System (pdf)
Antennas for Portable Devices (pdf)
Basic Antenna Principles for Mobile Communications (pdf)
Beam Antenna Handbook (pdf)
Installation of Mobile Communication Network Sites (pdf)
Microwave Antenna Theory And Design (pdf)
Slot Antennas (pdf)
UHF Antenna (pdf)
Методы расчета зон обслуживания сетей широкополосного беспроводного доступа (pdf)
Basics of Wi-Fi (pdf)
City of Milpitas Public Safety Broadband Data Communications (pdf)
How WiFi Works (ppt)
Implementing Wi-Fi (pdf)
What is the best WiFi antenna (doc)
Why wifi? (pdf)
Wi -Fi & Wi-Max (ppt)
Wi-Fi Executive Summary (pdf)
Wifi long shots newest (pdf)
WiFi Tutorial (pdf)
Recent Antenna Systems for Wireless System (doc)
Wireless Communication Systems (pdf)
Беспроводная камера XCAM2PIR (pdf)
беспроводные сети (ppt)
Беспроводные системы связи (ppt)
Расширенный диапазон беспроводных сетей (pdf)
433 MHz Indoor or Outdoor Stub Antenna (pdf)
Antenna Design for Low-Power RF Devices (pdf)
RD101 радиомодуль FSK 433 МГц с интерфейсом USB (pdf)
Specification Sheet 433MHz Antennas (pdf)
Wireless 418 MHz/433 MHz Antenna (pdf)
Experiments with Underwater Robot Localization and Tracking (pdf)
GH1201 Персональный GPS Трекер (pdf)
GPRS Personal Tracker UserGuide V40 (pdf)
GPS tracking (pdf)
GSM / GPRS / GPS Tracker Manual (pdf)
Mobile GPS tracking system (pdf)
Novel GPS tracking of sea (pdf)
TZ-GTM01 GPS TRACKER MODEM User Guide (pdf)
History of movement overview (pdf)
History of the Family Court Movement (pdf)
Online Data Reduction and the Quality of History in Moving Objects Databases (pdf)
История анимации (ppt)
Galileo system (pdf)
Proddage Generic Material (ppt)
GALILEO, GLONASS And NAVSTAR A Report on GPS for GIS People (pdf)
STUDIES AND SYSTEMS FOR ROMANIA’S PARTICIPATION IN THE GNSS-GALILEO PROGRAMME (doc)
GPS and Galileo Friendly Foes?
GPS versus Galileo (pdf)
The European Position Determination (pdf)
On the coexistence of satellite –UMTS (pdf)
1 AKyiTaw - AKyiTaw 20110529 LaMinPhanPwe NorthOkkalapa 56:272AKyiTaw - DoteKhaSoTarNaungTaChangeHarThaPar 3:353AttaKy...
ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၏ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်
တပ်မတော်ဟာ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းကြောင်းနဲ့ အတူ ယှဉ်တွဲ ပေါ်ပေါက်လာ ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်တယ်။ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (BIA) ...
စစ်မှုမထမ်းမနေရ စနစ်ဆိုသည်မှာ တပ်မတော်အတွင်းရှိ တပ်ဖွဲ့အသီးသီးတို့အတွက် အမိန့်အရ မဖြစ်မနေ ဝင်ရောက်အမှုထမ်းစေသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်း အထော...
ပထမ. . . သူတို့ သမ္မတကြီးကို မကောင်းရေးတယ်။ ကျုပ် . . ဘာမှ တုန့်ပြန်ရေးသားတာ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ကျုပ်က သမ္မတမှ. . . . မဟုတ်တာ။ ...
ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး (၁၀) ချက်
၁။ သိလိုစိတ် ပြင်းပြမှု (Curiosity) ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မဲ့ အရာမှန်သမျှကိ...
"ယနေ့မှစပြီး တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ငယ်များအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြမယ့် ရဲဘော်တို့ဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံတော်တာဝန်နှင့် တပ်မတ်ာတာဝန်မျာ...
ယနေ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နှင့် ယနေ့ တပ်မတော် ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Buddha Tayar Taw
ကြိုဆိုပါတယ် အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...။ မိသားစုဝင်များနှင့်ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါ၏။ ယခုချိန်မှာ အဖက်ဖက်က တိုးတက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ ...
hükümlü iş ilanları 2019 - isbak ile, kariyerinizde bir sonraki adımı edinebilmek amacıyla çevrimiçi şekilde milyonlarca işi arayabilirsiniz. İş arama motoru, cv ler, şirket inceleme...
Ph.D ကာလ ကျနော် လုပ်နေသော Research နှင့် ပါတ်သက် သော စာအုပ် များကို project တူသော ပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် Satellite Navigation & Traffic Control Systems ကို စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် အလွယ် တကူ download ချနိုင်ရန် စုစည်း ပေးထား ပါသည်........။
Application of Satellite Navigation & Communications in the View of the Czech Industry (ppt)
Applications in Galileo & Modernized GPS (pdf)
A 254 GNSS Location for the ETCS on-board (pdf)
Class 19 – NAVSTAR GPS, GLONASS and Galileo (ppt)
Comparison of Global Navigation Satellite System (pdf)
Design and Simulation of Multi-Frequency Global Navigation Satellite System Receiver (pdf)
Global Navigation Satellite Systems and Related Ground Infrastructure (pdf)
GMAT4900 /GMAT9200 Principles of GPS Positioning (pdf)
Impact Analysis of the implementaton of GNSS (pdf)
Implications ofaSystem of Receiver (pdf)
Inside GNSS (pdf)
Introduction of GNSS (ppt)
Lecture – NAVSTAR GPS, GLONASS and Galileo (ppt)
Localization-Based Systems (ppt)
News letter of GNSS (pdf)
Positioning, Navigation, and Timing Satellites (doc)
Present Satellite Radio Navigation System (ppt)
Processing of GNSS gound-based (ppt)
Satellite Availability (doc)
Satellite Navigation Science and Technology (ppt)
Satellite navigation technology secure (pdf)
Study of GPS software (ppt)
The Galileo satellite system and its security implications (pdf)
Time Transfer and Frequency Monitor Unit NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo (pdf)
Worldwide Trends in GNSS Development and their Implications for Civil User Performance and Safety (pdf)
Глобальные спутниковые системы (pdf)
Измерение времени. Глобальные навигационные спутниковые системы (doc)
Нанотехнологии в микроэлектронике и производство навигационно-связных комплексов (pdf)
Особенности применения спутниковых навигационных технологий (doc)
Спутниковые навигационные системы (doc)
A GPS Tutorial Basics of HighPrecision Global Positioning Systems-1998 (pdf)
Determine Location (ppt)
Exploring the market development trend and technological Innovation of GPS (doc)
Geotag Your Images (ppt)
Global Positioning System (GPS) Technology for Community Supervision: Lessons Learned (pdf)
Global Positioning System (ppt)
Global Positioning Systems (pdf)
Global Positioning Systems Inertial Navigation and Integration (pdf)
Global Positioning Systems Review_2 (ppt)
Global Positioning Systems: Review (ppt)
GPS Fundamentals (ppt)
GPS Interagency & International Actions (ppt)
GPS Theory (pdf)
Rockwell Adaptive Management System (pdf)
Status of the GPS (ppt)
Submitted in partial fulfillment (pdf)
Navigation System (pdf)
Глобальная навигационная спутниковая система (doc)
Глобальные навигационные спутниковые системы в обеспечении геодинамической безопасности разработки рудных месторождений (pdf)
ГЛОНАСС покроет всю территории России (doc)
Основные принципы установки (коррекции, синхронизации) времени (pdf)
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (pdf)
Россия планирует расширить сферу применения ГЛОНАСС (doc)
Система дистанционного ГЛОНАСС / GPS-мониторинга атмосферы (pdf)
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА (pdf)
СМИ О КОСМОСЕ (pdf)
Современные спутниковые радионавигационные системы (pdf)
Спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС (doc)
Спутниковые Навигационные Системы GPS и GLONONASS (pdf)
Чипов-приемников (Российские ГЛОНАСС) (doc)
Что такое ГлоНаСС (doc)
DEPARTMENTS OF MATHEMATICS (pdf)
Getting Started with MATLAB (pdf)
IMPLICITLY RESTARTED ARNOLDILANCZOS METHODS FOR LARGE SCALE EIGENVALUE CALCULATIONS (pdf)
MATLAB - Creating Graphical User Interfaces (pdf)
MATLAB - External Interfaces (pdf)
MATLAB - External Interfaces Reference (pdf)
MATLAB - MAT-File Format (pdf)
MATLAB - MATLAB® Programming Tips (pdf)
MATLAB - Using MATLAB Graphics (pdf)
MATLAB Function Reference Volume 1 A - E (pdf)
MATLAB Release Notes (pdf)
MATLAB Seminar Finance Moscow (ppt)
SPARSE MATRICES IN MATLAB DESIGN AND IMPLEMENTATION (pdf)
THE MATLAB ODE SUITE (pdf)
Using MATLAB (pdf)
My Master Research
Master တက်စဉ်က ကျနော် လုပ်ခဲ့သော Research နှင့် ပါတ်သက် သော စာအုပ် များကို project တူသော ပုဂ္ဂိုလ် များနှင့် Automatic Control System ကို စိတ်ဝင်စား သူများ အတွက် အလွယ် တကူ download ချနိုင်ရန် စုစည်း ပေးထား ပါသည်........။
GPS and E-911 (pdf)
GPS Inertial Navigation and Integration (pdf)
GPS Integrated (pdf)
GPS Receiver Design (pdf)
GPS-Based Personnel Tracking (pdf)
How GPS Receiver Works (pdf)
HunterPro GPS US (pdf)
Introduction to Navstar GPS (ppt)
JS Baltija GPS (ppt)
Naval Air Systems Symposium (ppt)
Определение координат и GPS навигация (doc)
Орбитальная группировка (doc)
Система Глобального Позиционирования (doc)
Состав системы GPS (doc)
Что такое GPS? (doc)
Basic Telephony and Cellular (ppt)
Conventional Networks GSM (pdf)
Extending the GSM/3G Key Infrastructure (ppt)
Global System for Mobile communications GSM (doc)
GSM - Global System for Mobile Communication (ppt)
GSM 0107 (pdf)
GSM Basices (pdf)
GSM Full Report (doc)
GSM Fundamental (ppt)
GSM Mobile Computing IT644 (ppt)
GSM Mobile Computing Summer 2004 (pdf)
GSM Mobile Repairing (doc)
GSM Network (pdf)
GSM notes (ppt)
GSM Overview (ppt)
GSM Pocket Guide (pdf)
GSM Sys Burst (pdf)
GSM System Survey / Cell Planning (pdf)
How GSM Works (pdf)
Introduction to GSM (pdf)
Security in GSM (pdf)
The GSM and GPRS network (pdf)
Компоненты [GSM / GPRS модули] (html)
PIC in Practice [A Project-Based Approach] (pdf_
PIC Microcontroller Project Book (pdf)
Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems (pdf)
Practical Digital Signal Processing for Engineers and Technicians (pdf)
Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting (pdf)
Practical Troubleshooting of Electrical Equipment and Control Circuits (pdf)